Mazita gumi ekugamuchira mukudonha uye nezvese zvido | Zvazvino Zvinyorwa
10 mazita ekugamuchira kudonha uku uye nezvese zvido
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Vechidiki Mabhuku, Novela, Romance novel, Nhetembo
Matsutso ari kuuya. Pakupedzisira. Mwaka wangu wepamoyo wegore. Iyo nharaunda inoshanduka, inotonhorera inouya, mazuva anopfupika ... Muchidimbu, mhepo inova isingakundiki pakuverenga. Autumn zvakare nguva uye sosi yekufemerwa, sezvazvakaitika kune vanyori gumi ava pavakanyora izvi Mabhuku e10. Kune zvese zvido, zve yakakura uye diki, inodzidzisa, nhetembo, zvinyorwa, zverudo, vafambi. Zvirongwa zvekutarisa, kuwana kana kuona zvekare.
1 Autumn muLondon - Andrea Izquierdo
2 Ndinokumirira iwe mukona yekupedzisira yematsutso - Casilda Sánchez Varela
3 Ngoma dzeNguva - Diana Gabaldón
4 Gamuchirai Autumn! - Ngirozi Navarro
5 Bhuku Rekupedzisira - Rotraut Susanne Berner
6 Zuva rematsutso - Rosa Gómez
7 Autumn yeRoma - Javier Reverte
8 Rwiyo rweKwindla muChirimo - Marcelo Galliano
9 Iyo Autumn yeMiddle Ages - Johan Huizinga
10 Autumn yeNgirozi Dzerima - Kristy Spencer naTabita Lee Spencer
Autumn muLondon - Andrea Izquierdo
Uyu munyori mudiki anobva kuZaragoza anosanganisa zvidzidzo zvake muMutemo neBusiness Administration pamwe nekunyora kwenyaya dzakateedzana dzinotanga neinovhero iri rakabudiswa muna 2016.
Lily anosvika kuEllesmere hotera mu Hyde Park. Akave akagamuchirwa kuyunivhesiti nekuda kudzidza uye ari kutya nekugara kwake kwoumbozha. Ipapo ndipo paanosangana Meredith naAva, avo vakaita sehove dziri mumvura munzvimbo iyoyo uye vanofarira kuti zvakavanzika zvavo hazviuye pachena. Naivowo Connor, Rex, Martha, Tom, Finn naOliver, uyo Lily aisazomboda kuona zvakare. Uye munhu wese nyaya dzavo dzinopindirana.
Ndinokumirira iwe mukona yekupedzisira yematsutso - Casilda Sánchez Varela
Romance novel vane protagonists, Cora Moret uye Chino Montenegro, vakasangana pakati pemakumi matanhatu emakore mungoro iri yoga yaienda kuCádiz. Vane makore gumi nemanomwe ekuberekwa, vakangwara, vanokakavara uye havana chimwe chinhu. Anorota kuve munyori. Uye anobvunza zvese. Asi vese vanozozivana semweya mweya mumwe uye wavo nyaya yerudo zvicharamba zvichienderera mberi, kusvikira panopera mazuva ake.
Ngoma dzematsutso - Diana Gabaldon
More kudanana novel neimwe yeiyo mambokadzi emhando yacho. Iyi ndiyo chikamu chechina yenyaya dzakateerana Outsider, vakagadzika nechekure american colonies. Ikoko vanosvika muna 1766 Claire naJamie mushure mekutiza Scotland. Ivo vanogara mumakomo eNorth Carolina mune tariro ye kuvaka purazi ugare kure yeiyo yava pedyo American Revolution. Uye munguva inotevera Brianna randall Akarasikirwa naamai vake uye arikuda kuziva nezve baba vake, vaaisaziva. Asi kutsamwa kunowanikwa nezvevabereki vake kunomutungamira kufamba kune zvakapfuura kuchinja nhoroondo.
Gamuchirai Autumn! - Ngirozi Navarro
Mazita ezvinzvimbo aigona kushaikwa kune vadiki uye heino unoenda wekutanga. Mubhuku rino zvakawanda zviitwa yakagadzirirwa mukudonha, yakanakira kuvaraidza mukati merwendo, zororo uye mazuva ekunaya. Pane puzzles, mazes, squiggles ... Uye zvese kuramba uchidzidza kuverenga, kudoma pfungwa, kurondedzera uye ruvara.
Bhuku rematsutso - Rotraut Susanne Berner
Uye iyi yechipiri, iyo iri uye pedzisa zvakateedzana nemunyori pamwaka. Zvekare iyo mifananidzo, peji rakapetwa, izere nemavara, ruzivo, mamiriro uye zviitiko zvine chekuita nematsutso. Hapana chinyorwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vese pre-vaverengi uye vekutanga kuverenga kuti vafarire nyaya dzakawanda dzinotaurwa kuburikidza nemadhirowa.
Zuva rematsutso - Rosa Gomez
Hazvigoneke kuti iyo nhetembo mune kumwe kuverenga kwenguva ino. Munyori uyu anounza kwatiri nezita iri. Roses, zvinyorwa, simba repfungwa uye runako rwemutauro kumutsidzira mweya uye kunzwa simba rakawanda.
Yechirume matsutso - Javier Reverte
Kwete sei kufamba kana kupisa kusingatonge. Uye pane imwe nzvimbo iri nani pane Guta Risingagumi kushandisa chidimbu chematsutso? Javier Reverte anotiudza mune diary fomu chiratidzo chake che «guta remaguta». Nemaitiro ake ega, akazara ne kuda, tsika nemagariro, nhoroondo, nhetembo, kuseka uye unyoro.
Rwiyo rwematsutso muchirimo - Marcelo Galliano
Munyori uyu Argentinian inotiunzira iro bhuku rinotaura nyaya yakona jaya rine makumi maviri kubva pachivako che Buenos Aires. Tanga kushanda munzvimbo yekugara kuchengeta munhu anorwara, vane hupenyu hunotadziswa mumwedzi mishoma. Asi pane zvakawanda kumashure kwekuonekwa kwemurume akanaka, akakura, murume wemamirioni waachawana nekushandura hupenyu hwake. Nhetembo, ndyaringo, kuda, kuseka uye erooticism kuti kurira kukuru.
Nguva yechando yeMiddle Ages - Johan Huizinga
Uyu mufananidzo wehupenyu, kufunga uye hunyanzvi panguva zana regumi nemana negumi nemashanu muFrance neNetherlands ndeyechinyakare kubva 1927. Huizinga anotiratidza a yakakura fresco kubva kunopera medieval era iyo inobvumira kuvakwazve kwenguva.
Autumn yeNgirozi Dzerima - Kristy Spencer naTabita Lee Spencer
Rakadhindwa muna 2014, ndiyo chikamu chechipiri chesaga Ngirozi dzakasviba yakanyorwa nasisi Kristy naTabita Lee Spencer. Inotitaurira nyaya yevamwe hanzvadzi mbiri, Dawna naIndie, ndichigara papurazi rinenge rakasiiwa rakazadzwa nendangariro dzenguva yakapfuura iri nani. Ivo vakasiyana kwazvo, asi zvinoita sekunge ivo vaviri rudo rwakarambidzwa. Kana pamwe kwete. Pakati pekuvapo kwavo vanobatanidza a chakavanzika chinotyisa uye rudo iyo inotora hupenyu hwese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 10 mazita ekugamuchira kudonha uku uye nezvese zvido
Mabasa akanakisa aStephen King
"Los pazos de Ulloa" naEmilia Pardo Bazán
Gamuchira nhau dzichangoburwa pamusoro pemabhuku muemail yako
1 miriyoni emahara emabhuku pane chero chishandiso?